Period Calendar Pro 1.577.128.PRO Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.577.128.PRO လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Period Calendar Pro
Period Calendar Pro ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
•ကြော်ငြာမနှင့်အတူ Pro ကိုကာလပြက္ခဒိန်။
အဆိုပါ★အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (4.7) ★ကာလအတွင်းပြက္ခဒိန်!
43 နိုင်ငံများကျော်ကနျြးမာရေး & ကြံခိုင်ရေးထိပ်တန်း 1 ။
63 နိုင်ငံများကျော်ကနျြးမာရေး & ကြံခိုင်ရေးထိပ်တန်း5။
40.000.000 ကျော်က Android အသုံးပြုသူများကာလပြက္ခဒိန်ချစ်ကြတယ်။
သင်၏နောက်ကာလအတွင်းမြေသြဇာနှင့်မျိုးဥထွက်ဖြစ်ပါတယ်သည့်အခါအစဉ်အမြဲငါသိ၏။ ကာလပြက္ခဒိန် , သင့်ကာလ, သံသရာ, မျိုးဥထွက်နှင့်ကိုယ်ဝန်, ပဋိသန္ဓေ ယူ. ရှာနေမိန်းမတို့အဘို့ကာလ tracker, ဒါမှမဟုတ် ကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု အခွင့်အလမ်းကိုခြေရာခံ။
မမှန်ကာလ နဲ့ပုံမှန်ကာလအဘို့ကာလ Tracker ။ ဒါဟာ ကိုယ်ဝန်အခွင့်အလမ်းကိုနေ့တိုင်း ကိုခြေရာခံသားအိမ်ခေါင်းချွဲ, BMI, လိင်ဆက်ဆံမှု, အလေးချိန်, အပူချိန်, ရောဂါလက္ခဏာတွေသို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုပဲသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာလဒိုင်ယာရီတူ, သငျသညျကြံ့ခိုင်ရေးကိုစောင့်ရှောက်ကူညီ, အလေးချိန် , ကျန်းမာစောင့်ရှောက်လော့။
★ဆေးသတိပေးချက် & ကာလသတိပေးချက်:
- ဒါကြောင့်သတိပညာရှိဖြစ်စေခြင်းငှါအမိန့်ကြော်ငြာစာကိုစာသား Customize နှင့်အများပြည်သူအတွက်အဆင်မပြေခံစားရဘူး။
- ကာလအထိမ်းအမှတ်နှင့်မျိုးဥထွက် tracker တွင်အဘို့အမိန့်ကြော်ငြာစာ
- ကိုတားဆေးဆေးပြား ကိုသတိပေးတဲ့ (ဆေးလုံး, လက်စွပ်, patch ကို & ဆေးထိုးပါဝင်သည်)
★ကာလ & မြေသြဇာကောင်းသော Tracker:
- ရာသီ, စက်ဘီး, မျိုးဥထွက်ခန့်မှန်းချက်, သင်ဒီအစီအစဉ်အတွက်အရာအားလုံးကို
- မျိုးဥထွက်ဂဏန်းတွက်စက်နှင့် tracker
- ကာလ Calculator ကိုနှင့်မျိုးပွားမှု Calculator ကို
★ကိုယ်ဝန်ဆောင် & မွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်ရေးရဖို့ကြိုးစား:
- သားအိမ်ခေါင်းကုမ္ပဏီသားအိမ်ခေါင်းချွဲ, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖွင့်လှစ်တူ၏မြေသြဇာကောင်းသောရောဂါလက္ခဏာ tracker တွင်,
- သင်ကိုယ်ဝန်တားချင်တယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းကိုယ်ဝန်အခွင့်အလမ်း Check;
★ဆုံးရှုံးမှုအလေးချိန်, Tracker ရောဂါလက္ခဏာများ & စိတ်ဓါတ်များ:
- နီးစပ်ခြင်း tracker တွင်
- ကိုမျိုးဥထွက်စမ်းသပ်မှုရလဒ်သည်နှင့်အညီသင့်ရဲ့မျိုးဥထွက်နေ့စွဲင Smart ခန့်မှန်း
★ Data ကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဘယ်တော့မှမ:
- ကို Google Account ကို ကို data တွေကို backup လုပ်ထားနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အတူ
- ဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုကာလအတွင်း Backup ကို Restore နှင့်
ဘက်စုံအကောင့် & လုံခြုံရေး★:
- ဘက်စုံအကောင့်အသစ်များ၏ကာကွယ်မှုကိုခြေရာခံ & လုံခြုံရေးမှ
- အချိန်ဇယားအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောမှတ်စု View သို့မဟုတ်ရှာဖွေ
- မည်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. အချင်းချင်းနှငျ့ဆကျသှယျနှင့်လဲလှယ်စိတ်ကူးများရန်
** ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်း Check **:
Period Calendar Pro အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Period Calendar Pro အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Period Calendar Pro အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Period Calendar Pro အား အခ်က္ျပပါ
donkarleon စတိုး 25.24k 5.76M
Period Calendar Pro ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Period Calendar Pro အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.577.128.PRO
App Name: Period Calendar Pro
လက်မှတ် SHA1: 16:B4:08:75:4B:DB:D7:FC:3A:0C:BB:C0:03:C3:F7:35:62:64:76:00
နယ်မြေ (L): zhengzhou
Period Calendar Pro APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ